Goretti Irisarri iyo Jose Gil Romero. Wareysi lala yeeshay qorayaasha La traductora | Suugaanta Hadda
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 11/09/2021 12:00 | La cusbooneysiiyay 12/09/2021 09:18 | Wareysiyada, Qorayaasha, Buugaag
Bogga Twitter -ka ee qorayaasha.
Goretti Irisarri iyo Jose Gil Romero Waxay ahaayeen lammaane hal abuur leh in ka badan labaatan sano waxayna daabaceen cinwaanno sida saddex -geesoodka ah Dhammaan intii dhimatay (laga sameeyay Xiddigaha wax tooganaya ayaa dhacaya, Farsamooyinka Sirta iyo Magaalada ku xeeran), tusaale ahaan. Turjumaan Waa sheekadeedii ugu dambaysay oo hadda uun bay soo baxday bishan. Aad baan kuugu mahad naqayaa waqtigaaga iyo naxariistaada inaad ii hibeyso wareysigan oo laba gacmood ah oo tusaya inay hubaal yihiin inay si fiican wax u qabtaan.
Goretti Irisarri iyo Jose Gil Romero - Wareysi
SUUQA HADDA Turjumaan waa sheekadaada cusub. Maxaad nooga sheegeysaa oo xaggee fikraddu ka timid?
JOSE GIL ROMERO: Sheekooyinka sheekooyinka cusub maxaa dhici kara sideeda daqiiqo ee dib u dhaca kaas oo Tareenka Franco ayuu yimid la kulanka hitler ee Hendaye. Laga soo bilaabo dhacdadaas dhabta ah waxaan horumarinaynaa a sheeko jacayl iyo shaki, oo uu jilayo turjumaan, haweeney aan geesinimo lahayn, oo kaliya doonaysa inay nabad ku noolaato, oo ku hawlan qorshe basaasnimo ah.
GORETTI IRISARRI: Waxaa aad noo soo jiitay fikradda ah in la meeleeyo jilaaga oo ku nool khiyaamo badan tareenkaas xawliga ku socda, waa muuqaal shaneemo oo isla markiiba aan ka fikirnay Hitchcock, filimadaas aad bilawdo inaad aragto oo aanay ku sii dayn.
AL: Ma ku noqon kartaa buuggii ugu horreeyay ee aad akhriday? Iyo sheekadii ugu horreysay ee aad qortay?
GI: Xaaladayda waxaan ku bilaabay Tolkien, Hobbitka, ama ugu yaraan waa buuggii ugu horreeyey ee aan xasuusto. Waxay la mid ahayd helitaanka daroogo waligeyna ma joojin.
JGR: Akhri malaha buugga qaar ka mid ah Shantii, taas oo walaashay ku haysan lahayd khaanadda. Laakiin shaki la'aan waxa calaamadeeyay carruurnimadaydii, oo waxaan dhihi lahaa noloshaydu, waxay ahayd Hooyo, waxaa qoray Carlos Giménez markaan xogta haynno Oo qor ... hubaal qoraalka mid ka mid ah majaajiladaas oo aan barbaaray anigoo dhalinyaro ah, kuwaas oo ahaa sheekooyin argagax leh bahallo, si weyn u saameeyay Shisheeyaha by James Cameron iyo saamaynta gaarka ah ee filimada David Cronenberg.
AL: Qoraa madax ah? Waxaad dooran kartaa in ka badan hal iyo dhammaan waayihii.
JGR: Gore ayaa iga akhris badan (qosol). Laakiin waxaa jira wax badan ... García Márquez iyo Galdós, Horacio Quiroga iyo Stefan laanta, Perez Reverte iyo Eduardo Mendoza, Bukowski...
GI: waran baan u jebinayaa hablaha. Waxaan gacantayda saari lahaa dab wax kasta oo ka yimid Sei Shonagon, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Susan Sontag ama kuwa ugu caansan surfer, Agatha Christie...
JGR: waa maxay?
GI: Dhab ahaan, Agatha wuxuu ahaa horjoogaha baddaWaxaa jira qaar ka mid ah sawirro runtii qabow iyada oo looxdu qabato mowjado.
JGR: Waxaan jeclaan lahaa inaan la kulmo shisheeye maxaad raadinaysaa Gurb.
GI: Waa maxay su'aal fiican! Hagaag waan jeclaan lahaa ku abuuraan aad u mugdi badan dawladnimada Maroojin kale. Oo xagga aqoonta ... kabtan nemo, iyo in uu igu soo qaatay safar yar oo ku yaal gunta hoose ee Vigo estuary, taas oo sida muuqata meesha taallay.
GI: Kahor intaadan ku qorin raadinta sawirrada. Si aan u gaaro goob cusub waxaan u baahanahay inaan arko sawirro i geli macnaha guud, fikradaha labiska qosolka leh, waji gaar ah.
JGR: Si aad wax u akhrido, hadda wax maankaaga ku soo dhaca ma jiraan ... oo fiiri, waxaan ahay nin maangaab ah! Haa, eeg: Caadi ahaan waxaan iibsadaa wax badan oo gacan labaad ah, Waa hagaag, uma dulqaadan karo inaan qof kale hoosta ka xarriiqo buug. Indhahaygu waxay u jeedaan baaragaraafyadaas oo mid kale ka helay xiise waxayna iga mashquulisay, way i mashquulisay. Waxaan ku idhi, ninyahow (qosol).
AL: Oo meeshaas iyo waqtigaas ayaa doorbiday in la sameeyo?
JGR: Si aad wax u akhrido, shaki kuma jiro hurdada ka hor, ee sariirta.
GI: Waxaan u leeyahay dhadhan qaloocsan xagga akhriska meesha buuq badani ka jiro, sida tareenka dhulka hoostiisa mara. Waan jeclahay fiirsiga ay igu qasbeyso, naftayda aad ayaan u sii quusiyaa.
GI: Runtii waan jeclahay waxa la yiraahdo suugaanta noocyadiisa, akhriska iyo qorista labadaba. In la qoro waa wax weyn in ay jirto xeerarka ku xira, xaddidaadaha sida kuwa qeexaya nooc. Hal -abuurku si aad u fiican buu u shaqeeyaa. Waxaa jira dokumentiyo uu qoray Lars von Trier, Shan shuruudood, kaas oo si fiican u sharxaya: Von Trier wuxuu u babac dhigayaa qoraaga filim gaaban inuu shan toogto remakes oo ah mid gaaban, oo mar kasta waxay gelinaysaa xaalad adag, oo aan macquul ahayn. Laakiin arrinta ugu naxdinta badan ayaa ah markii Lars Von Trier u sheego in markan uusan wax shuruud ah ku xidhin: wuxuu ka tegayaa qoraaga saboolka ah oo aan la ilaalin godka ka hor, kaas oo ah xorriyadda guud.
JGR: Noocyo badan oo kala duwan, laakiin… haa, hiwaayad kale: Si dhib leh uma akhriyo suugaan aan ahayn Isbaanish. Waxay iga dhigtaa mid walwalsan si aan u maleeyo in tarjumaadda aan akhrinayo aysan noqon doonin mid dhammaystiran iyo in tani ay kharribayso akhriskayga. Waa fikrad aad u neerfaha ah, waan ogahay, oo waxaan lahaa wax badan oo xiiso leh oo u nisbeeyay qof ka yimid Turjumaan, oo odhanaya wax u eg "Waxaan ku kalsoonahay tayada tarjumaadda ee aan heli doono."
AL: Maxaad hadda akhrinaysaa? Iyo qorista?
GI: waan akhrinayaa Jidka qiirada leh ee Madrid, ee Carrère, oo ay daabacday La Felguera. Emilio Carrere, qoraaga Toddoba munaaraddii hunchbacks, Waxa uu ahaa dabeecad aad u gaar ah, gabyaa gabyaa ah oo bohemian ah, oo dagaalka ka dib qaatay siyaasaddii Franco. Waa mid ka mid ah suugaanyahannada aan fikraddoodu sahlanayn in la calaamadiyo. Daaran Turjumaan wuxuu soo baxayaa isagoo gabay ka akhrinaya idaacadda, halkaas oo uu caan ku ahaa. Gabaygu wuxuu ammaan u yahay Naasigii galay Paris, Paris hoosteeda swastika.
Waxaan aad u danaynaynay inaan tusno hoolkii waqtigaas, markii wax walba aysan u cadayn sida hadda oo ay jireen waxgarad la dhacsan Naasiyiinta. Tusaale ahaan, waxaa Círculo de Bellas Artes lagu qabtay bandhig weyn oo ku yaal buugga Jarmalka, kaas oo waliba ka muuqda sheekada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sawirradaas oo leh swastikado waaweyn oo ku dhagan darbiyada Wareegga ... Sheekadu waa sida ay tahay.
JGR: Waan akhrinayaa Geesiga kun waji lehby Campbell. Runtii waan jeclahay ku celcelin. Wax badan ayaan ka akhriyay hababka sheekada iyo wax la mid ah, si aan u arko haddii aan wax yar barto (qoslo)
Ku saabsan waxa aan qorayno, waxaan soo dhameynay sheeko cusub aad ayaana ugu qanacsanahay. Waxaan rajeyneynaa inaan ku siin karno warar ku saabsan daabacaaddeeda, wax yar.
JGR: Hagaag, waxaan dhihi lahaa si ka wanaagsan sidii hore waxaanan dhihi lahaa si ka xun sidii hore. Waxaan ula jeedaa in la daabaco wax badan, wax badan, laakiin xaalado adag: waqtiyada dhiig -miirashada aad bay u gaaban yihiin tartankuna waa daran yahay. Waxaa jira dad badan oo wanaagsan oo qora buugaag waaweyn akhristahana ma laha waqti iyo awood uu ku doorto. Inta badan dembiilayaasha ayaa jidka ku baaba'a ama xitaa ma sameeyaan. Waana wax layaab leh in laga fikiro inta dad karti leh oo halkaas jooga, oo lunsan.
GI: sidoo kale waxaan qabaa habka cusub ee khayaaliga maqalka maqalka ayaa si weyn u miisaamaya, gaar ahaan taxanaha telefishanka, kuwaas oo noqday suugaanyahanno aadna uga taxadara horumarinta jilayaasha ama sahaminta sheekooyinka. Waxayna yihiin a tartan adag, maxaa yeelay waqtiga aad ku bixisid daawashada cutubyada iyo cutubyada taxanaha ah kuma qaadato akhriska.
JGR: Kuwani waa waqtiyo adag. Waxaa jira dad badan oo rafaadsan ama dhibaataysan. PDhinaceena, waxaan kaliya keeni karnaa gargaar gaar ah, oo ah hab yar oo looga bixi karo dhibaatadaas. Qaar ka mid ah taas ayaa looga hadlaa gudaha Turjumaan sidoo kale: laga bilaabo jidka badbaadada ee buugaagtu u malaynayaan dadka iyo, macnahaas, riwaayaddu waxay u tahay suugaanta. Waxaan rajeyneynaa, xitaa inyar, akhristeyaasheenna way naga fogaan doonaan mahadsanid. Taasi waxay noqon lahayd qurux
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Wareysiyada » Goretti Irisarri iyo Jose Gil Romero. Wareysi lala yeeshay qorayaasha La traductora